FUN2G Co., Ltd – Posted by FUN2G DIGITAL AGENCY – Yangon, Yangon Region, Myanmar (Burma)
– Web application ရေးတာ အနည်းဆုံး၂နှစ် အတွေ့အကြုံရှိရမယ်။ အတွေ.အကြုံနည်းသော်လည်း Passion ရှိလျှင်လျှောက်ထားနိုင်သည်။
– PHP (or) Python (or) NodeJs (or) MVC frameworks (Laravel, Zend, Yii etc.), SQL, တွေထဲက frameworks တစ်ခုခုကို expert ဖြစ်နေရမယ်
– WordPress Project များလည်း အတွေ့အကြုံရှိသူ
– REST API’s တွေကို Design နဲ့ Developing ပိုင်းဆရာကျနေရမယ်
– AWS ဒါမှမဟုတ် တခြား cloud computing platforms တစ်ခုခုကိုလည်း လုပ်ကိုင်ဖူးပြီး ကောင်းကောင်းကိုင်တွယ်နိုင်ရမယ်။
မိမိကိုယ်ကိုယ် Full Stack Back-end developer တစ်ယောက်လို့ ယုံကြည်ပါက [email protected] သို့ လုပ်ကိုင်ဖူးသော Project များ၊ အတွေ.အကြုံ များ နှင့်တကွ မျှော်မှန်းလစာ တို.ကို ပို.ပြီး အမြန်ဆုံး လျှောက်လိုက်ပါ။
အေးချမ်း ပျူငှာ စိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းတဲ့ လူတွေနဲ့ သွားရလာရလွယ်ကူအဆင်ပြေစေတဲ့ နေရာမှာ အလုပ်လုပ်ရပါမယ်။
*အလုပ်ခန့်ထားခြင်းအတွက် အသားအရောင်၊ လူမျိုး၊ ကိုးကွယ်ရာဘာသာ၊ လိင်တိမ်းညွတ်ရာတို့ကို ခွဲခြားခြင်းမရှိပါ။
Job Categories: Information Technology (IT). Job Types: Full-Time. Job expires in5days.